3000 Gore Rakare Mummai Tattoo - Tatidzo Art Ideas
3000 Gore Rekare Mukadzi Tattoo
3,000 Gore rekare amaikadzi vaiva mummy vakafukidzwa mumatanda akavanzika. Mukadzi, akawanikwa mumusha unonzi Deir el-Medina, Egypt, akambova mukadzi aizvikudza achiona maziso matsvene pamutsipa, mapepa, uye shure, mazamu mazamu muhudyu, uye mhou paruoko rwake.
Zvidhori pamutsipa wemudzimai
Mukadzi akawanikwa mumusha weDeir el-Medina. Cherechedza kuti dzimwe mifananidzo dzinoonekwa kune ziso rakashama, asi dzimwe dziri pamativi emuviri akave akafukidzwa neshinda dzinoshandiswa mukudzikisa.
Achishandisa imagery inonzi infrared, anthropologist Ghada Darwish Al-Khafif akakwanisa kuona iyi mifananidzo yemhou mbiri, dzinomirira mwarikadzi Hathor. Akashandisawo shanduro yemagetsi kuti abhadhara kutengesa kwechifananidzo chakakonzerwa nekucheka kweganda remukadzi.
Nyanzvi yezvinyorwa Ghada Darwish Al-Khafif anoshandisa imaging infrared kuti aone zviratidzo pamaperembudzi akaora.
Verenga nyaya yakazara pano
lotus flower tattoozodiac zviratidzo zviratidzotattoos for girlsAnkle Tattooselephant tattooshumba tattoocompass tattoozuva tattoosAnchor tattoosneck tattooswatercolor tattootattoo yezisoarrow tattookorona tattoosinfinity tattoorose tattoosangel tattoosmehndi designhenna tattoohanzvadzi tattoosGeometric TattoosHeart Tattoostattoos kuvanhucat tattoosFeather Tattoocross tattoostribal tattoosdiamond tattoorudo tattooscherry blossom tattooscorpion tattooshamwari yakanakisisa tattoosbutterfly tattoosbirds tattoostattoo ideascute tattoossleeve tattoosflower tattoosmimhanzi tattoosfoot tattoosoctopus tattoomwedzi tattoosrip tattooseagle tattoosback tattooskoi fish tattoocouple tattoosarm tattoosmaoko tattooschifuva tattoos